Fanadihadiana ny lisi-pifidianana : Fahefana avy aiza ny an’ny OIF? -
AccueilRaharaham-pirenenaFanadihadiana ny lisi-pifidianana : Fahefana avy aiza ny an’ny OIF?
Araka ny vaovao voaangona teny anivon’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny Ceni, hanatanteraka fanaraha-maso sy fijerena manokana, na ihany koa fanadihadiana ny lisi-pifidianana ho amin’ny fifidianana Filoham-pirenena eto Madagasikara ny eo anivon’ny Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) amin’ny alalan’ny iraka manokana avy amin’izy ireo. Mahakasika izay dia hisy ny fivoriana hiarahan’ny Ceni amin’ny OIF anio, eny Nanisana.
Hatreto, mampametra-panontaniana izany iraka ataon’ny OIF eto Madagasikara izany mahakasika ny fanadihadiana ataony momba ny lisi-pifidianana. Ny lalàna velona eto amintsika rahateo anefa mametra fa rehefa nakaton’ny Ceni nanomboka ny 15 avrily lasa teo ny lisi-pifidianana dia tsy azo atao intsony ny manokatra izany. Raha ity ataon’ny OIF ity anefa, izy ireo indray izany no hametraka eto amin’ny firenena ka hanokatra indray ny lisi-pifidianana izay efa nakatona araka ny lalàna. Fahefana avy aiza tokoa ny an’ny OIF, ary inona ny fahefan’izy ireo eo anatrehan’ny lalàna eto amintsika? Rehefa ny OIF ve dia afaka manokatra indray ny lisitry ny mpifidy ahafahany manaporofo fa namita iraka teto amintsika izy ireo?
Na inona na inona tsy fahatokisan’ireo vondrona iraisam-pirenena eto amintsika mahakasika ny lisi-pifidianana, tsy anjaran’izy ireo mihitsy no manatanteraka fanadihadiana amin’izany. Efa mipetraka sy mazava ny lalàna amin’ny tsy fahafahana manokatra intsony ny lisi-pifidianana taorian’ny fanakatonana azy dia tokony hajaina izay ary tokony manaraka izany avokoa ny rehetra.
Raha tanteraka soa aman-tsara ity iraka ataon’ny OIF ity, ary raha sanatria ka mahita tsy fahatomombanana amin’ny lisi-pifidianana izy ireo dia hanao ahoana ny mety ho tohin’ny tantaram-pifidianana. Mety handray fanapahan-kevitra amin’ny famerenana ny fanisana ireo mpifidy indray ve ny Ceni sa dia alefa amin’io ihany, ka amin’ny fifidianana manaraka indray no hanavaozana ny lisitra. Araka izany, ny OIF indray izany no hampiteraka savorovoro sy korontana manodidina ny fifidianana eto amintsika.